Beledweyne:-Saraakiisha ciidanka DFS ee maamulka gobollka Hiiraan iyo kuwa AMISOM ayaa waxaa ay saxaafada u sheegeen in eedaysane Mukhtaar Xassan Maxamed oo loo qabtay in uu dilay 27-bishii November guddoomiyihii gollaha odayaasha dhaqan ka gobollka Hiiraan Maxamed Shiikh Xusseen Maryacade in uu qirtay danbigaas.
Taliyaha qeybta Booliska magaalada Baladweyne Col. Isaaq Cali ayaa saxaafada u sheegay in eedeysane Mukhtaar Xassan Maxamed ay ciidanka DFS qabteen markii uu falka geystay ka dib baaritaan ay ku sameeyeena ay ogaadeen in uu yahay shaksiga dilka fuliyey haddana uu isagu qirtay danbigaas.
Taliyaha qeybta Booliska magaalada Baladweyne Col Isaaq Cali ayaa waxaa kale oo uu saxaafada u sheegay in eedeysane Mukhtaar Xassan uu gabaad siiyey iyo meel uu ka dego magaalada Baladweyn mid ka mid ah taageerayaasha ururka Al-shabaab ee ku nool magaalada Baladweyne taasna ay u fududaysay in uu dilka fuliyo.
Eeysane Mukhtaar Xassan oo la hadlay saxaafada ayaa qirtay danbiga waxaan uu sheegay in uu isagu ahaa qofkii xabadaha la dhacay Allaha u naxariistee guddoomiyihii gollaha odayaasha dhaqanka gobollka Hiiraan Maxamed Shiikh Xusseen Maryacade isagoo xusay in uusan aqoonin guddoomiyaha balse nin la socday uu tusay maadaam isagu uu ka yimid degmada Buula-burte si uu dilka u fuliyo.
Eeysane Mukhtaar Xassan ayaa sidoo kale sheegay in ururka Al-shabaab ay u soo direen magalaada Baladweyne si uu u khaarajiyo guddoomiyihii gollaha odayaasha dhaqanka gobollka Hiiraan Maxamed Shiikh Xusseen Maryacade oo maalin ka dib markii loo doortay xilkaas la dilay.
Eeysane Mukhtaar Xassan ayaa ku jira gacanta ciidanka DFS iyo kuwa AMISOM ee magalaada Baladweyne waxaan masuuliyiinta maamulka Gobolka Hiiraan ay u sheegeen saxaafada in dhawaan la soo taagi doono Maxkamada. Ilaa hadda wax war ah kama soo bixin ururka Al-shabaab oo iyaga lagu eedeeyey in ay fuliyeen dilka guddoomiyihii gollaha odayaasha dhaqanka gobollka Hiiraan Maxamed Shiikh Xusseen Maryacade.